समाचार - आनन्दित लालटेन फेस्टिवल!
शुक्रवार, फेब्रुअरी २,, २०२१ सबै चिनियाँहरूका लागि लालटेन फेस्टिवल हो। यो रमाइलो चाड हो। विशेष गरी रातको रमाइलो छ।
यस दिन, मानिसहरूले लालटिनलाई झुण्ड्याउँछन् र यसको मुर्का भित्र राख्छन्। त्यसपछि खेल आउँछ: पहेलो अनुमान लगाउनुहोस्!
पहेलिको दाँया अनुमान गर्नेले पुरस्कारहरू जित्छ। यो जिज्ञासु र हाँसो र खुशीले भरिएको PK खेल जस्तै हो।
साथै त्यहाँ परम्परागत गतिविधिहरूको श्रृंखला छ कि लालटेन हेर्ने, डम्पलिंग खाने र फटाकाहरू बन्द गर्ने जस्ता।
साँझमा, लालटिनहरू उज्यालो हुनेछन्। राम्रो रात बनाउँछ!
यहाँ हामी सबैको सर्वश्रेष्ठ ल्यान्टर्न फेस्टिवल होस् भन्ने चाहन्छौं!
जानकारी: गतिविधि र लालटेन चाडको इतिहास:
लालटेन फेस्टिवल पहिलो चंद्र महिनाको १th औं दिनमा खाइन्छ। "युआनक्सियाओ" लाई हाम्रो देशमा लामो समयदेखि खानाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सॉन्ग राजवंशमा, लालटेन फेस्टिवलको लागि एक उपन्यासको भोजन मानिसहरू बीच लोकप्रिय भयो। यस किसिमको खानालाई पहिले "फ्लोटिंग युआन्जी" र पछि "युआनक्सियाओ" भनिन्थ्यो, र व्यापारीहरूले यसलाई "युआनबाओ" पनि बोलाउँथे। लालटेन फेस्टिवलमा चिनी, गुलाब, तिल, सिमी पेस्ट, दालचीनी, अखरोटको गुँड, नट, जुजुब पेस्ट, आदि प्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्दछ। भराव गठन र लसुन चामलको आटा मा रोल हुन्छ। चिसो चावलको बलहरू पहिले चिपचिलो चामलको पिठोको छालामा बनाइन्छ। यो स्टफिंगको साथ बनेको छ, र विधि पूर्ण रूपमा भिन्न छ। ल्यान्टर्न फेस्टिवल या त मासु वा शाकाहारी हुन सक्छ, विभिन्न स्वादहरूको साथ। यसलाई सूपमा उमालेर, गहिरो तलेको, र उमालेको बनाउन सकिन्छ।
पहेली अनुमान गर्नुहोस्:
लालटेन पहेलाहरूको अनुमानलाई पनि लालटेन पहेलाहरू पनि भनिन्छ। यो ल्यान्टर्न फेस्टिवलको परम्परागत गतिविधि हो। लालटेन पहेलाहरू मूल रूपमा पहेलाहरूबाट विकसित भएको थियो र वसन्त र शरद र वारि States राज्य कालमा शुरु भयो। मान्छेले अनुमान गर्न र गोली हान्नको लागि यो बज्जा सामदानमा झुण्डिरहन्छ। यो दक्षिणी गीत राजवंशमा शुरू भयो। दक्षिणी गीत झाउ मीको "मार्शल आर्टको बारेमा पुरानो कुराहरु?" "डेंग पिन" रेकर्ड: "कविता, उपहास, र पेन्ट वर्णहरू, लुकेका टाउकोको लिंगो, र पुरानो बेइजि language भाषा, पैदल यात्रीहरूलाई छेड्न रेशम लालटिनहरू प्रयोग गर्नुहोस्।" लालटेन फेस्टिवल, सम्राट शहर कहिल्यै रात हुँदैन, वसन्त महोत्सव लालटेन फेस्टिवल, व्यक्ति विविध, कविताहरू, पहेलिका, पुस्तकहरू बत्तीहरूमा छन्, मैनबत्तीमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, सम्पूर्ण दृश्यमा सूचीबद्ध गरिएको छ, मानिसहरूले अनुमान गर्न अनुमति दिँदैछन्, त्यसैले यसलाई "लालटिन पहेलियां" भनिन्छ।
यो गतिविधि मुख्यतया सेरीकल्चरका लागि हो। चूहोंले प्राय: राती रेशमका कीराको ठूलो खाजा खाने गर्दछन्, मानिसहरूले सुनेका छन् कि यदि तिनीहरूले पहिलो चन्द्र महिनाको पन्ध्रौं दिनमा चामल दलियासँग चूहों खुवाए भने, तिनीहरूले रेशमका कीरा छोड्न सक्छन्। तसर्थ, यी व्यक्तिहरूले पहिलो चन्द्र महिनाको पन्ध्रौं दिनमा पातलो दलियाको ठूलो भाँडो उमाले, र ती मध्ये केहीले यसलाई मासुको लेयरले ढाक्यो। एक शब्द पढ्दा, माउसलाई श्राप दिँदै रेसम कीराको बच्चा खानको लागि यसलाई कडा बनाउन कठिन भयो।